गुरमित राम रहिम सिंहः किन भारतीय बलत्कारी गुरू चेलाहरूकाे लागी अझै भग्वान हाे ? | Khabar Dainik
गुरमित राम रहिम सिंहः किन भारतीय बलत्कारी गुरू...
गुरमित राम रहिम सिंहः किन भारतीय बलत्कारी गुरू चेलाहरूकाे लागी अझै भग्वान हाे ?
अाफूलार्इ मानवदेवता मान्ने भारतीय धार्मिक गुरू गुरमित राम रहिम सिंहकाे विषयमा धेरै कुरा छापीएकाे छ तर उसकाे चेलाहरूकाे विषयमा भने केहि पनि भनिएकाे छैन ।
संसार भरी ६०० लाख भक्तहरू रहेकाे उसकाे दाबी भए पनि त्याे बढाइचढाइ गरिएकाे हुनसक्छ, तर याे कुनै शंका छैन वृहत मानिसहरूले उसबाट प्रेरणाा पाएकाे छ जसले अाफूलार्इ अलाैकिक मानव सम्झन्थियाे ।
धेरै भक्तहरूकाे लागी उ पिता जस्तै भएकाे गवाही दिइरहेकाे मिडिया तथा प्रकाशनहरूमा देख्न सकिन्छ । काेही भक्तहरू उसले बनाएकाे डेराहरूमा समेत बस्दै अाएका हुनाले उनलार्इ जीवनकाे श्राेत पनि मान्न गर्दै अाएका छन् । धेरै परिवारहरूमा गुरूले भूमिका खेलेका थिए ।
कसै कसै अनुयायी अनुसार तिनीहरूकाे तेश्राे पुस्ताहरूसम्म यी गुरूका भक्तजनहरू थिए । उनकै डेरामा अाफ्नाे बच्चाहरूलार्इ विद्यालय र कलेजसमेत पठाउँथे ।
गत शुक्रबार गुरमित बलत्करकाे दाेषी ठहराइदा संसारभरी उसकाे भक्तहरू बदमासका काम गरी विराेध प्रदर्शन समेत गरे । तिनीहरूले मिडियाका गाडीहरूमा अाक्रण गरी, रेलहरू, बसहरू र रेल स्टेसनहरूमा अागाे लगाए ।
उत्तर भारत भरी तहलका मचियाे जसले गर्दा पुलिसकाे भिडन्तमा करिब ४० जना मरे भने २०० भन्दा बढी घाइते भए ।
तर पनि यी दुःखद घटनाकाे कारण काेहि भक्तहरू भने अाफ्नाे करतूतके कारण लाजमा परेकाे स्वीकार गरिएकाे समेत घटनाहरू बाहिर अाए । गुरूका साँचाे भक्तहरू कहिल्यै पनि यस्ताे मारपिटमा सहभागी हुदैनन जस्ताे कुरा गरिरहेका छन् ।
गुरूले गरीबहरूलार्इ गाँस, बास र कपास दिएकाे सम्झना गर्दै धेरै भक्तहरूले गुरूकाे पतनमा अाफ्नाे पनि पतनकाे बाटाे बनिएकाे र सबै कुरा गुमेकाे व्यक्त गरेका छन् । त्यसमाथि चरित्र, मान्यता र राम्राे मानव बन्ने शिक्षाहरू पनि अब नपाउने गुनासाे भर्इरहेकाे छ । गुरूले उनीहरूलार्इ याेगा गरार्इ चिन्तन र ध्यान गर्न सिकार्इ अात्म स्वयम बन्न सिकाएका थिए भन्ने जानकारी पाइएकाे छ ।
उनका धेरै अनुयायीहरू गुरूसँग जादुयी शक्तिहरू भएकाे गवाही दिँदै तिनकाे शक्तिहरूबाट बचाइएकाे कुरा समेत निकाले । गुरूले दिएकाे मन्त्र जपि निश्चयता र सामर्थी भएकाे गुणगान यी दिन यी बिराेह अनुयायीहरूमा यादकाे रूपमा रहेकाे छ ।
रहीमले अाफ्नाे शिक्षाहरू फैलाउन MSG(Messenger of GOD) म्यागजिन पनि प्रकाशन गरेका छन र एकदम अारामदायी जीवन जीएका थिए । उनकाे एउटा फिल्म पनि बजारमा अाएकाे थियाे किनभने चलचित्रबाट यिनी जवानहरूलार्इ प्रभाव पार्न चहान्थे ।
त्याे बलत्कारकाे दाेषले पनि उसकाे भक्तहरूकाे प्रेम, विश्वास र निष्ठा भने पटक्कै घटाउन सकेकाे छैन । याे सबैकाे कारण एक राजनिति रणनिति र मायाजाल हाे भनेर टारिदिएका छन् ।